မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): မိမိကွန်ပျုတာထဲကနေ မကြည့်စေချင်သော ၀က်ဆိုဒ်တွေကို ရွေးပိတ်နည်း
မိမိကွန်ပျုတာထဲကနေ မကြည့်စေချင်သော ၀က်ဆိုဒ်တွေကို ရွေးပိတ်နည်း
ဒီနည်းလေးကတော့ မိမိတို့ ရဲကွန်ပျုတာတွေထဲမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေကို
သီးသန့် ပိတ်ထားချင်ရင်ရပါတယ် ။ပိတ်နည်းက အများကြီးရှိတယ် ဆော့ဝဲသုံးမယ်ဆို
ကြာတယ် ကွန်ပျုတာကနေ ပိတ်နည်းကို ပြောပြပါမယ် ။ တစ်ခါတလေမှာ မကြည့်စေ
ချင် မဖွင့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေရှိမှာပါ ။ ဥပမာ Sexy နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆိုဒ်တွေ နဲ့ မိမိတို့ 
စိတ်ကူးထဲ ရှိသမျှ မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ပိတ်လို့ ရပါတယ် ။ ရုံးတွေမှာဆိုရင်
သူဌေးက ဖေ့ဘွတ်မသုံးအောင် ပိတ်ထားမယ်ဆို ဒီလိုနည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့
ကိုယ်ကနေ ရုံးထဲမှာ သူများကွန်ပျုတာကို Facebook သုံးမရ Gmail သုံးမရအောင်
စမ်းသပ်လို့ ရပါတယ် ။ မသိသာပါဘူး ။ Unable to connect လို့ ပဲ ပြနေပါလိမ့်မယ်..။
ပထမဆုံး Runbox ဖွင့်ပါ ( Window + R တွဲ နှိပ်ပါ )
ဒီစာကို ကူးထည့် - c:\_WINDOWS\_system32\_drivers\_etc\_hosts
ပြီးရင် Window7ဆိုရင် Notepad ကိုရွေးပြီး OK နှိပ် ( Xp ဆို Auto ပွင့်ပါတယ်)
ပွင့်လာပြီဆိုရင် အထဲမှာ ဆိုဒ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ အထိ ပိတ်လို့ ရပါတယ်အောက်ဆုံးက
# ::1 localhost ဒီစာရဲ့အောက် တည့်တည့်ကနေ ပိတ်မယ့်ဆိုဒ်ရေးပါ
127.0.0.1 www.facebook.com ဒီလိုရေးပါ ။ နောက်ထပ်ဆိုဒ်တွေကို ဆက်ရေးပါ
ပြီးရင် Ctrl + S ကို နှိပ်ပြီးဆေ့လိုက်ရင် ရပါပြီ ။ .ပိတ်ချင် အောက်မှာဆက်ရေးပါ
ထူးခြားချက်လေးကတော့ Virus ထင်ပြီး Antivirus က Alarm အချက်ပေးလာခဲ့ရင်
Virus မဟုတ်ပါဘူး Allow ပေးလိုက်ပါ သေချာချင်ရင်တော့ Anti Virus ဆော့ဝဲကို
ခဏပိတ်ထားပါ ။ နောက်ထပ် ထူးခြားချက်ကတော့ Window7မှာ ဖြစ်တတ်ပါ၏
Save လုပ်လို့ မရတာမျိုး ပါ ။Save လုပ်ရင် Admin ကို ဆက်သွယ်ခိုင်းပြီ တခြားမှာ
Save ဖို့ ပြောလာခဲ့ရင် တစ်ခုခု ထပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် Control Pennel ထဲကနေပြီး
Action Center ကိုဝင်ပါ Change and User Account and Control Setting ကို နှိပ်
Never notify အထိ ဆွဲချ OK ပေးပြီးမှ အပေါ်က အဆင့်အတိုင်း ပြန်စလုပ်ကြည့်
ဖြစ်တတ်တာ နှစ်ခုက အဲ့ဒါပါပဲ။ Virus တားမယ် ။Save မရဖြစ်ရင် အခုလို လုပ်ပါ
ပိတ်ချင်တဲ့သူများ စမ်းပါ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ မဖွင့်စေချင်တာကို စမ်းပါ ဒီနည်းကို
သိချင်တဲ့သူ မေးတဲ့သူက သူ့ ကွန်ပျုတာမှာ အတူနေ သူငယ်ချင်းတွေကနေပြီး
Sexy Website ကြည့်လို့ ပါတဲ့ .။ ကဲ ဒီနည်းနဲ့ သာ ပိတ်ထား မပွင့်တော့ဘူး..........။
လာလည်တဲ့သူများ ပညာတိုးပြီး စာရေးသူအပေါ် ဆဲဆိုခြင်းမရှိကြပါစေနဲ့ ဘုရား။
အသေးစိတ် သိလိုပါက မူရင်းလင့်နှိပ်ပါ - http://www.prioarena.com/
Author Anonymous at 3:11:00 AM
Labels: Computerမှာသိသင့်သောပညာများ, Hacking နည်းပညာများ
websites တွေ block လုပ်လို. မရဘူး ... အကိုပြောတဲ.အတိုင်းလုပ်တယ် မရဘူး..... ကူညီပါအုံး.... my pc is windows 8. i think thats why i cant .....any idea? need help :) (t.ahphong93@gmail.com )
ကျွန်တော်က window 8.1 သုံးတာပါ။ အကိုပြောတဲ့နည်းအတိုင်းလုပ်လို့ တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့Chrome မှာပိတ်ပါတယ် သို့ သော် Mozilla firefox မှာတော့ရနေပါတယ်။ဘယ်လိုမှပိတ်မရပါ။
Yewin Ko said...